Manohy ny didohany ny Fitsarana, Rnm, Tvm! – MyDago.com aime Madagascar
Araka ny fantatra dia tsy mety manome valin-teny entitra tamin’ireo mpitarika ny « rodobe » ny fampanoavana, ny tompon’andraikitra ao amin’ny haino aman-jerim-panjakana fa mandrirarira hatrany ny valin-teny.
Tsy hitsahatra hatrany anefa ny fitakiana izany hoy izy ireo satria an’ny Malagasy rehetra ireo fa tsy an’olom-bitsy.
Raha ny fandaharam-potoana rahampitso dia fantatra fa hisy toerana halehan’ny « rodobe » rahampitso maraina saingy mbola tsy nolazaina hatreto izany noho ny resaka stratejika fa ny tolakandro kosa dia hiverina etsy amin’ny kianjan’ny finoana Magro Behoririka ny fanaovana tatitra ny vahoaka !
7 pensées sur “Manohy ny didohany ny Fitsarana, Rnm, Tvm!”
27 mai 2011 à 21 h 42 min
Angamba tsara ny manangana station radio ao afrika atsimo afaka manenika ny nosy manontolo satria efa tena leo be ny rnm sy ny tvm ny any amin’ny faritra.Tsy azo antoka efa hatry ny ela.Dia aely eran’ny nosy amin’ny alalan’io radio io fa tsy tokony hijery tvm fa amporisihana ny chaines hafa hampiseho fialam-boly hoan’ny besinimaro rehefa mandefa vaovao ny foza isany.Ilay bitrodia dia tsy mieritreritra afa tsy ny hijanona eo fa te hatao hoe mahavita azy (ravalo no ifaninanana)nefa fahaizana zedra fa be mokony fotsiny nefa foza.Piss off coward!
Azo dinihina ihany io hevitr’i Bemahafoy io, fa ny fahamaikana no olana aminy!… Ny tena antony hanaovantsika an’io fahalalahana io anie dia ny momba ny krizy amin’izao fotoana izo e!.. Sady an’ny Gasy ny TVM sy RNM fa tsy an’ny FATn’alika entin’i Andry RADOMELINA! Maninona izy ireo raha any amin’ny VIVA maty no manao teriterena fa tsy aty amin’ny Radio sy TV-mpirenena!
Ny mpanao gazety ao koa moa dia tsy misy ilàna azy mihitsy e! Na tarehy na bika!… Jereo anie ry Johary RAVOAJANAHARY e! Soa ihany fa tsy ao intsony ilay iny fa tena tora-tomany foana ho’aho ny zanako vavy kely raha vao mahita ny tarehiny! « fa avy amin’ny planety aiza izy io ry Dada »? HA!HA!HA!HA!HA
28 mai 2011 à 5 h 17 min
Na ho ela, tsara indrindra atao haingana, na inona mety ho sarany, miangavy re tompok’ô:
ATSANGANO AVY ANY IVELANY NY station RADIO,
MAHA-HENIKA ERAN’NY NOSY E!
28 mai 2011 à 6 h 29 min
tokony tsy hanaiky lembenanana isika satria volantsika vahoaka no omena ny mpiasan’ny rnm sy tvm koa nahoana moa no avela amin’izao? rehefa tsy nanaiky ry zareo dia samia mihaino tsara ny rnm sy tvm dia izay mpiasa miiteniteny foana eo no hanaterana taratasy manaraka.Aleo manko alan’andriana toa izay alam-bahoaka! nga moa andriana i ANdry Radomelina???,,
28 mai 2011 à 7 h 22 min
Marina mihitsy ny hetaheta momba ny radio sy télé… tsy fidiny ahy ary hialako tsiny aminareo fa tsy fidiny ho ahy ny nampiditra Canal sat ,fa tsy mijery na mihaino Tvm sy Rnm intsony zaho zao, ao mantsy mba mijery baolina film sns… ny olana anefa dia tsy maharaka vaovaon’ny tolona ho an’ny Malagasy satria efa tratran’ny Fatin’alika ny Radion’ny gasy ka sao de misy vahaolana haingana tokoa é!!!!
Miankina amin’izay fanampahin-kevitra avy any Gaborone io ! Tsy afaka hitazona an’ireo fananam-bahoaka ireo foana ny foza !
Ny zavatra efa fantatra aloha izao, dia misavoritaka tanteraka ny foza rehetra !!!
29 mai 2011 à 8 h 36 min
Raha resaka NEGOTIATION izany dia ho LANY ANDRO FOANA ISIKA , io GABORONA IO izao dia raha vao tsy mifanaraka @ izay tian’ny FOZA dia LAVINY FOTSINY IZAO INDRAY e , FEUILLE DE ROUTE ASSURE 100% HOY IZAHO DIA NY : RODOBE IHANY marina : mbola tsy mazava amintsika ihany ve fa : MIADY @ DEVOLY e
Précédent Article précédent : Oui pour la participation du Président MARC RAVALOMANANA à la prochaine élection présidentielle !
Suivant Article suivant : Madagascar n’a nul besoin d’aide étrangère selon Rajoelina